चिनो हराएको कर्णलीको कहानी र भोकमरी – हिमालयन ट्रिबुन
कर्णालीको बारेमा लेख्न र बोल्नेहरुको राराको मनमोहक तस्बिर उतारछन् । फोक्सुन्डो तालको स्वर्ग स्वरुप बयान गर्छन् । कर्णालीको भोकको बारेमा कौर गरिन्छ, तर त्यो प्रदेशको स्थानीय खानाको वास्ता गरिन्न । कालीकोट र जुम्लामा बस्दा चिनो खान पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा धेरै सरकारी कर्मचारी व्यपारी आदिले भने कहाँ आजकाल चिनो पाइन्छ र चिनो, कोदो, फापर त लगाउनै छोडे नि । अब त यहाँका मानिसहरुले त सेतोे चामल खान पाएका छन् किन चिनो लगाउन दुःख गर्नु नि ?
मैले भने चिनो त एकदम राम्रो पौष्टिक खाना हो त्यहाँ लगाउनै छोेडनु त साह्रै दुः खको कुरा भयो नि मेरो कुरा सुनेर जुम्लाका आदर्श किसान राम बुढा थापाले भनेका थिए चिनो राम्रो भनेर कसलाई थाहा थियो ? यसको बजार राम्रो पाए त म नै रोप्थे नि । के गर्नु यहाँ त स्थानीय अन्न नै सखाप पार्यो सरकारले ।
कर्णालीको सुन्दरताको बारेमा जति लेखिन्छन्, कर्णलीको दुःख त्यो भन्दा धेरै छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको कुरा दुई महिनापछि मात्र जुम्लामा पुगेको थियो रे अहिले काठमाडौंमा भएको घटनाको खबर मोबाइल, इनटरनेटबाट मिनेटमा जुम्लामा पुग्छ । तर अपसोच प्रविधीको राम्रो साधारण मानिसको जिवनमा ल्याउन बाँकी नै छ । कुपोषणको मारमा रहेको कर्णालिमा काठमाडौंले चामल खान सिकायो तर कर्णालीको फापर वा कोदो चामल भन्दा राम्रो छ भन्ने कुरा एफएम र मोबाइलबाट सिकाउन जानेन ।
ठूला हाकिमले पनि कर्णालीमा चामल खाए, चिनो खाएनन् कर्णालीको नाममा बन्यो आयोग कता गयो कता कर्णालीका पत्रकार पुरिचन्द्र देबकोटाले कर्णाली दर्पण किताबमा लेखेका छन् । सरकारले गरिबका नाममा चामल पठाउन थालेपछि कर्णालीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको हो । सरकारले प्रत्येक बर्ष कर्णालीमा चामल पठाएको कुरा गर्वसाथ घोषण गर्दछ । बास्तवमा सरकार र कर्णालीका सांसदलाई त लाजमर्दोे हुनुपर्ने हो चामल पठाएर जनतालाई भोकमरिको चपेटामा परिरहन त्यसैगरि कर्णालीका जटिवुटीका बारेमा जति कुरा गरे पनि यदि जटिबुटी केबल बेचिने काम मात्र भयो र स्थानीय महिलाहरुले त्यस्तो औषधिको उपयोग गरेर स्वास्थ्य राम्रो पार्ने सकेनन् र केबल ब्यापारीको लागि हुने भने के अर्थ भयो ?
कर्णालीलाई सुन्दर बनाउन चाहनेहरुले पहिलो त मान्छेको जीवन सुन्दर बनाउन पर्यो । कर्णालीको चिनो नहराओस् भनेर काम गर्नुपर्यो, नत्र त अबको ५० पछि पनि कर्णालीको भोकमरी त्यहीँ नै हुन्छ ।